ब्राजील प्राकृतिक स्रोतहरू। खनिज र उद्योग ब्राजील
ब्राजील - जो दक्षिण अमेरिका को लगभग आधा महादेशमा लिन्छ ल्याटिन अमेरिका, मा सबै भन्दा ठूलो देश। पूर्व र उत्तर एटलान्टिक महासागर द्वारा। ब्राजिल, प्राकृतिक स्रोतहरू र अंतर रहन्थ्यो कि अवस्था - अनुकूल देश खेती र जनसंख्याको जीवित लागि।
देश को उत्तरी भाग मा छ , Amazonian lowland। यसलाई बिस्तारै ल्याइने भएको गायना Highlands को फाँटमा ठाडो भीर घेरिएको हुन्छ। देश को बाँकी क्षेत्र को वस्तुतः सबै उत्तर-पूर्व र दक्षिण र steeply एटलांटिक तटीय सादा मा बढ्दो, ब्राजीलियाई पठार कब्जा गरिएको छ। को अवशिष्ट रिज र फैलयो बेल्ट monoklinarno-गठन र फाँटमा को गठन एटलांटिक क्षेत्र arrays को पश्चिम गर्न; उत्तरी र केन्द्र मा socle फाँटमा र plateaus, plateaus संग interspersed प्रभुत्व छ।
ब्राजिलको तातो जलवायु द्वारा विशेषता छ। प्राकृतिक स्रोतहरू climatic शर्तहरूमा हदसम्म कारण छन्। मासिक औसत तापमान 16 29 डिग्री देखि, र केवल पूर्वी सम्भव चिसो उच्च arrays मा दायरा। तर, एक देशको लागि जलवायु र वर्षा regimes विभिन्न प्रकारका विशेषता द्वारा।
ब्राजिलका प्राकृतिक सुविधाहरूको बारेमा बोल्ने, यो उल्लेख गर्नुपर्छ यो धेरै बाक्लो नदी नेटवर्क छ। अमेजन सिस्टम सम्पूर्ण अमेजन क्षेत्र, उत्तरी ब्राजील र गायना Highlands को दक्षिण irrigates। सिंचाई सुविधा उपलब्ध प्रणाली ब्राजीलियाई Highlands को दक्षिणी भाग नदीहरू Parana को नदी पाराग्वे, पूर्व - - नदी सैन र Uruguay, पश्चिम। यी को, केवल अमेजन र वर्षैभरि यसको पश्चिमी र पूर्वी tributaries पानी भरिएका छन्।
ब्राजीलियाई Highlands नदीहरू लागि पानी प्रवाह र बाढी मा ठूलो उतार चढाव द्वारा विशेषता छ। पानी धमनी पठार जलविद्युत् को धेरै रिजर्व तथापि, सामान्यतया केवल छोटो दूरीमा बढी navigable छ।
वनस्पति र soils
वन प्रभुत्व lateritic (ferralitnyh) रातो soils मा एक देशमा। दृढ काठ को दुनिया रिजर्व मा प्रथम स्थान ब्राजील लिन्छ। को अमेजन को पश्चिमी भाग मा प्राकृतिक स्रोतहरू बाक्लो सदाबहार द्वारा प्रस्तुत जो अन्तर्गत lateritic podzolic soils छन् बहुमूल्य रूखहरू (4 भन्दा बढी हजार प्रजाति), संग, इक्वेटोरियल वन आर्द्र।
ब्राजीलियाई र फ्रेम कि पहाड मा गायना Highlands, सुक्खा मौसम अनित्य र सदाबहार वनको फलस्वरूप फैलाउन, podzoleniya प्रक्रिया माटो मा अस्थिर र कमजोर छ। खाता altitudinal क्षेत्र मा लिएर वनस्पति र माटो को समान प्रकार, को windward, पूर्वी र उच्च दायरा र ब्राजिलियन Highlands को पहाड को विशेषता हो। पश्चिमी ढलान मुख्य रूप भिजेको मौसमी वन विशेषता। केन्द्र पठार रातो lateritic soils, सबै भन्दा साधारण melkoderevnye shrubby Savannah मा savanna कब्जा। नदी ग्यालरी जंगल, जहाँ यसलाई बढ्छ बहुमूल्य carnauba मोम पाम साथ स्थित। रातो-खैरो र रातो-खैरो soils मा succulent र Xerophytic shrubs र रूखहरू पूर्वोत्तर पठार व्यस्त अर्द्ध-मरुभूमि विरल निर्वाचकगण। सदाबहार र ब्राजिलियन conifer Araucaria को मिश्रित अनित्य वन द्वारा विशेषता समान नम दक्षिण लागि। को lowlands रातो-कालो भू-भाग मा घाँसदार savanna bezderevnye फैलियो।
Fauna एक ठूलो विविधता पारिस्थितिकी को विविधता र ब्राजील कब्जा इलाका को महत्वपूर्ण आकार श्रेय गर्न सकिन्छ। पनि taxonomists कहिलेकाहीं देशमा बस्ने पशुहरू को वर्गीकरण मा असहमत किनभने विभिन्न स्रोतहरूबाट मा Fauna को समीक्षा, फरक छ। Punctually अरु जस्तै समयमा, दुर्भाग्यवश, बाहिर मरिरहेका, नयाँ प्रजाति पहिचान।
सबै देशहरूको ब्राजील सबैभन्दा ठूलो रकम प्राइमेट प्रजाति (बारेमा 77 मील) र अलवण माछाहरू (अधिक3हजार) विशेषता। amphibians संख्या अनुसार देश चरा प्रजाति संख्या मा संसारमा दोस्रो रैंकों - तेस्रो, सरीसृप को प्रजाति संख्या - पाँचौं। धेरै जनावर विशेष गरी यस्तो अटलांटिक वन रूपमा अब ठूलो हदसम्म नष्ट छन् पारिस्थितिकी, बस्ने, endangered छन्।
ब्राजील गरेको अर्थव्यवस्था
कारण औद्योगिक र खानी उद्योग, कृषि, सेवाहरू क्षेत्र र जीडीपी को मामला मा काम जनसंख्याको ठूलो संख्या को विकास को उच्च स्तरमा, ब्राजील अन्य सबै ल्याटिन अमेरिकी देशहरूको धेरै अगाडि छ। हाल, त्यो थप विश्व बजारमा उपस्थिति विस्तार। मुख्य निर्यात उत्पादनहरु - कफी, विमान, वाहन, फलाम अयस्क, भटमास, स्टील, सुन्तला रस, जूता, वस्त्र, चीनी, विद्युत उपकरण।
ब्राजील गरेको अर्थव्यवस्था धेरै विविध छ र क्षेत्रहरु बीच महत्वपूर्ण भेरिएसनहरूमा छ। शहर को व्यापार गरिरहेको को संभावनाहरु मा प्रत्येक अन्य देखि धेरै भिन्न छन्। राज्य गरेको अर्थव्यवस्था एकदम विकसित भए तापनि महत्वपूर्ण विकास अवरोधहरू अझै पनि गरिबी, निरक्षरता र भ्रष्टाचार को व्यापक समस्या हो।
ब्राजील उपयोगी स्रोतहरू
देश खनिज को चालीस भन्दा बढी प्रकारका उत्पादन गर्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण को मैंगनीज अयस्क छन्। त्यसैले, वर्ष फलाम अयस्क को दुई भन्दा बढी सय मिलियन टन, लगभग 80 प्रतिशत निर्यात भएको छ, जो को उत्पादन। Bauxite राज्य संसारमा पहिलो ठाउँहरू मध्ये एक हो। खनिज ब्राजील तामा, जस्ता, निकल घरेलू बजार को लागि प्रयोग गरिन्छ जो जम्मा रूपमा प्रस्तुत। निओबियम, टंगस्टन, अभ्रक, Zirconium: देश कच्चा माल को रणनीतिक आपूर्तिकर्ता छ। तेल लागि वार्षिक माग ब्राजील यसलाई आयात गर्न बाध्य छ त केवल आधा प्रदान, 75 लाख टन छ। 1970 मा अमेजन। सुनको ठूलो रिजर्व फेला, अब यसको उत्पादन प्रति वर्ष 80 टन छ। कोइला जम्मा पनि पाइन्छन्, तर यो गरिब गुणस्तर को कच्चा माल, यसको उत्पादन को वर्ष5लाख टन छ।
सबैभन्दा विकसित ब्राजिलियन उद्योग देश को दक्षिण-पूर्व र दक्षिण मा केंद्रित छ। को poorest क्षेत्र उत्तर-पूर्वी मानिन्छ, तर उहाँले अब लगानी आकर्षित गर्न सुरु गरिएको छ। ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा ब्राजील गार्हस्थ्य उत्पादनको एक-तेस्रो constituting सबैभन्दा विकसित औद्योगिक क्षेत्र छ। राज्य स्टील, हवाईजहाज, कम्प्युटर, र उपभोक्ता सामान गर्न कार र तेल देखि, उत्पादनहरु को एक किसिम को उत्पादन।
कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक चौथाई भन्दा बढी समेट्छ विनिर्माण उद्योग ब्राजिलमा। मुख्य उद्योग - तेल शोधन र रासायनिक उत्पादन। अमेरिका को संयुक्त राज्य अमेरिका पछि सबै भन्दा ठूलो इन्धन लागि मांग लगभग 30 प्रतिशत प्रदान गर्दछ जो, bioethanol को निर्माता छ। ब्राजिलमा वाहन इन्धन भर्ने लागि, इथेनल शुद्ध फारममा रूपमा प्रयोग वा पेट्रोल संग मिश्रित छ। यसको उत्पादन लागि कच्चा माल रूपमा कार्य sugarcane। ब्राजिलियन कम्पनीहरु सालाना 16-20 अर्ब लिटर को मात्रा मा इथेनल उत्पादन।
हरेक वर्ष, 1.5 लाख भन्दा बढी वाहन देश मा उत्पादन। मुख्य उत्पादकहरू - कम्पनी "मर्सिडीज बेन्ज", "Scania", "फिएट"।
प्रकाश उद्योग को मुख्य शाखा - कपडा। ब्राजील संसारमा कपडा उत्पादन को उत्पादन मा 6-7 छ। कपास को बारेमा 80 प्रतिशत कारण ब्राजिलियन कच्चा माल को कम गुणस्तर गर्न, विदेश बाट आयात गरिएको छ।
साथै, जुत्ता उद्योग को विकास - जूता को उत्पादन को लागि4भन्दा बढी हजार बोट संग।
ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा, उच्चतम आर्थिक क्षमता, कुनै शङ्का बीचमा, ब्राजील छ। यो देश को प्राकृतिक स्रोतहरू विकास लागि पनि अत्यन्तै अवसर प्रदान गर्दछ। तथापि, रूपमा अझै देश आय मा धेरै भिन्नता र पश्चिमी र पूर्वी क्षेत्रहरु को विकास को स्तर मा ठूलो फरक विशेषता द्वारा छ।
के महादेशमा इङ्गल्याण्ड छ, र त्यो रुचि कि
कम्पास - उपकरण। "कम्पास" कार्यक्रम - एक ...
को सम्पत्ति राजतन्त्र के हो? अवधारणा, विशेषताहरु र उदाहरण
विशेषताहरु र जापान को द्वीप को नाम। Honshu देखि Yumenosimy गर्न
विषय "मेरो पहिलो शिक्षक" मा एक निबंध: कसरी आफ्नो विचार व्यक्त गर्न?
Tull - यो ... परिभाषा, उदाहरणहरू र शरीर विज्ञान को सुविधाहरू
Otorova - यो के हो? शब्द र समानार्थीहरूको अर्थ
कसरी सही2कम्प्युटरमा एक मनिटर जडान गर्न
संसारको सबैभन्दा रोमांटिक स्थानहरू (तस्बिर)
जो रोगहरु खनिज पानी प्रयोग गर्न सकिन्छ "Essentuki"?
Leprechaun - यो कल्पना छ वा छैन?
सार्वजनिक खर्च को Multipliers। राज्य र अर्थव्यवस्था
Anapa सबैभन्दा रोचक र जीवन्त मनोरञ्जन
Guillermo डेल Toro फिलिम "पान गरेको Labyrinth": अभिनेता र भूमिकाको
कस्मेटिक्स मा गुलाबी माटो
दबाइ "Inofert": निर्देशन, analogues, मूल्यहरू समीक्षा
यो पदक "सोभियत आर्कटिक को रक्षा को लागि।" पुरस्कार र वितरण मा विनियमन